Nephi a Otsĩa Ebiasa
Nephi Nwoma No
Nephi ne Babanyin, Ɔno a Ɔyɛ Helaman ne Babanyin
Na Helaman yɛ Helaman ne babanyin, ɔno a ɔyɛ Alma ne babanyin, a ɔyɛ Alma ne babanyin, nyia ɔyɛ Nephi n’asenyi no a ɔyɛ Lehi a ofii Jerusalem bae wɔ afe a odzi kan a nna Zedekiah dzi hen wɔ Judah no ne babanyin.
1 Afei ɔbaa dɛ nna afe a ɔtɔ do eduokron biako ebotwa mu kɔ ma mber a Lehi dze fii Jerusalem no abɛyɛ amfe ahaesia; aber no na Lachoneus na ɔyɛ ɔtsɛmbuafo panyin nye ambrado wɔ asaase no do.
2 Na Nephi, Helaman ne ba no efi Zarahemla asaase no do na, ɔdze aayewa mprɛtse nye nkyerɛwee nyinara a wɔdze esie nye ndzɛmba a ɔyɛ krɔnkrɔn nyinara a wɔdze esie fitsi ber a Lehi fii Jerusalem no, ahyɛ ne babanyin bNephi ne nsa, a ɔyɛ n’abakan no.
3 Afei ofii asaase no do kɔree, na abeebi a ɔkɔree no, nyimpa biara nnyim; na ne ba Nephi dze kyerɛwsɛm no siei maa no, nyew, dɛm nkorɔfo yi ho nsɛm no.
4 Na ɔbaa dɛ afe a ɔtɔ do eduokron ebien n’ahyɛse no, hwɛ, nkɔnhyɛfo no hɔn nkɔnhyɛ hyɛɛ ase dɛ ɔrehyɛ mã; na nsɛnkyerɛdze akɛse nye etumdze akɛse hyɛɛ ase sisii nkorɔfo no mu.
5 Mbom nna binom wɔ hɔ a wɔahyɛ ase rekã dɛ nsɛm a Samuel, Lamannyi akãe dɛ ɔbɛba mu no ne ber apa ho.
6 Na wɔhyɛɛ ase dɛ woridzi ehurusi wɔ hɔn enuanom do rese dɛ: Hwɛ mber no apa ho, na Samuel ne nsɛm no ammba mu; dɛm ntsi, hom enyigye nye hom gyedzi a ɔwɔ dɛm nsɛm yi ho no ayɛ gyan.
7 Na ɔbaa dɛ wɔyɛɛ dede kɛsenara wɔ asaase no do; na dodowara a wɔgyee dzii no hɔn werɛ hyɛɛ ase dɛ ɔrohow papanara, dɛ annyɛ a dɛm ndzɛmba a wɔakã ho asɛm no remmba mu.
8 Mbom hwɛ, wosii nketse weɔnee wɔ dɛm da no nye dɛm anafua no na dɛm da kor bi no ɔyɛɛ dɛ gyama anafua bi nnyi hɔ, ama woeehu dɛ hɔn gyedzi annyɛ gyan.
9 Afei ɔbaa dɛ ekyingyefo no dze da bi sii hɔ dɛ sɛ asɛnkyerɛdze no a nkɔnhyɛnyi Samuel kãa no ammba mu a awobokuku hɔn a wɔgyee dɛm amambra yi dzii no.
10 Afei ɔbaa dɛ ber a Nephi ne ba, Nephi hun no nkorɔfo no hɔn etsirmɔdzendze yi no, n’akoma dzii yaw mbordo.
11 Na ɔbaa dɛ ɔkɔree na ɔdze noho kɔtoo famu, na osũu dzendzenndzen frɛɛ Nyankopɔn dze maa no nkorɔfo no, nyew, wɔ hɔn a worubokuku hɔn no ho, osian hɔn gyedzi a ɔwɔ hɔn egyanom hɔn amambra mu no ntsi.
12 Na ɔbaa dɛ osũu dzendzenndzen frɛɛ Ewuradze ada no nyina; na hwɛ, Ewuradze ne ndze baa ne nkyɛn see dɛ:
13 Ma wo tsir do na hyɛ dzen; na hwɛ, ber no abɛn, na anafua yi wɔbɛda asɛnkyerɛdze no edzi akyerɛ, na aadzekyee no mebɛba wiadze yi mu abɛma wiadzemba ehu dɛ dza mama mo nkɔnhyɛfo krɔnkrɔn dze hɔn bano akã nyina ahyɛ mã.
14 Hwɛ, amereba mankasa medze hɔ abɛma ndzɛmba nyina bahyɛ mã, dza mada no edzi akyerɛ adasamba fitsi wiadze ne cfapem, na mabɛyɛ dEgya nye Ɔba hɔn pɛ—Egya no osian emi ntsi, na Ɔba no osian mo honam ntsi. Na hwɛ, aber no abɛn, na anafua yi na wɔbɛda asɛnkyerɛdze no edzi akyerɛ.
15 Na ɔbaa dɛ nsɛm a ɔbaa Nephi nkyɛn no hyɛɛ ma, dɛ mbrɛ wɔkãa no ara; na hwɛ, ber a wi kɔtɔree no nna asum nnyi hɔ; na ahobow hyɛɛ ase dɛ ɔrekã dɔm no osiandɛ sum annhyɛ ber a adzesaa bae no.
16 Na dodowara wɔ hɔ a wɔanngye nkɔnhyɛfo no nsɛm no enndzi, na awɔhwehwee famu na wɔyɛɛ dɛ mbrɛ woewuwu, osiandɛ wonyim dɛ bɔsɛɛ ho nhyehyɛɛ kɛse no a wɔahyehyɛ ato hɔ ama hɔn a wɔgyee nkɔnhyɛfo no nsɛm dzii no asɛɛ koraa; osiandɛ asɛnkyerɛdze no a wɔdze mae no reba mu.
17 Na wohun dɛ Nyankopɔn ne Ba ne mbaa no abɛn; nyew, ne sin ara nye dɛ, nyimpa a wɔwɔ asaase n’enyi do, fitsi anee kɛpem boka, nye etsifi kɛpem anaafo nyina ho boow hɔn mbordo ma wɔhwehwee ase.
18 Na wonyim dɛ nkɔnhyɛfo no agye dɛm ndzɛmba yi ho dase mfe pii, na asɛnkyerɛdze no a wɔdze mae no reba mu; na wɔhyɛɛ ase suroi osian hɔn emumuyɛ nye hɔn ekyingye ntsi.
19 Na ɔbaa dɛ sum annhyɛ anafua no nyina, mbom ɔyɛɛ kann dɛ ewiaber. Na ɔbaa dɛ adzekyee no ewia puee bio, dɛ mbrɛ opue dabaa no; na wohun dɛ dɛm da no nye da a ɔsɛ dɛ awɔwo Ewuradze, osian asɛnkyerɛdze a wɔdze ama no ntsi.
20 Na ndzɛmba nyina baa mu, nyew, biribiara, dɛ mbrɛ nkɔnhyɛfo no hɔn nsɛm no se.
21 Na ɔbaa so dɛ anworaba fofor bi puei, dɛ mbrɛ asɛm no se.
22 Na ɔbaa dɛ ofi dɛm aber yi dze kɔ no, Satan hyɛɛ ase dze ndaadaa bɛhyɛɛ dɔm no mu, ama woeepirim hɔn akoma, amma wɔanngye dɛm nsɛnkyerɛdze nye anwanwadze a woehu no enndzi; mbom dɛm atorsɛm nye ndaadaa yi nyina ekyir no nkorɔfo no mu dodowara gyee dzii na wɔ sakyeree baa Ewuradze nkyɛn.
23 Na ɔbaa dɛ Nephi kɔr nkorɔfo no mu konumaa hɔn kɔr nnuho mu, ma wonyaa abɔnfakyɛ pii. Na dɛm maa nkorɔfo no hyɛɛ ase bio dɛ worinya asomdwee wɔ asaase no do.
24 Na wentwiwentwi biara nnyi hɔ gyedɛ hɔn mu kakraabi a wɔhyɛɛ ase dɛ wɔnam kyerɛwsɛm no do rekã dɛ aonnhia bio dɛ wobedzi Moses mbra do no. Afei woyinom fomee, na wɔanntse kyerɛwsɛm no ase yie.
25 Mbom ɔbaa dɛ annkyɛr na hɔn nyina nyaa nsakyer, na wohun mfom a nna wɔwɔ mu, osiandɛ wɔmaa wohun dɛ mbrasɛm no annyaa nnhyɛɛ mã, na otwar dɛ ne nyina hyɛ mã; nyew, asɛm no baa hɔn nkyɛn dɛ ɔwɔ dɛ ɔhyɛ mã; nyew, no mu ketseketse kor anaadɛ nsensanee kor mpo nnkotwa mu kesi dɛ ne nyina bɛhyɛ mã; dɛm ntsi dɛm afe yi ara mu na wɔmaa wohun hɔn mfom ma dɛm ntsi bwɔkãa hɔn mfom ho kyerɛɛ.
26 Na dɛm na afe a ɔtɔ do eduokron ebien no twaa mu kɔree, na ɔdze enyigyesɛm brɛɛ nkorɔfo no osian nsɛnkyerɛdze a nkɔnhyɛfo krɔnkrɔn nyinara hyɛɛ ho nkɔm no a osisii no ntsi.
27 Na ɔbaa dɛ afe a ɔtɔ do eduokron ebiasa so botwaa mu kɔree wɔ asomdwee mu, gyedɛ aGadianton edwotwafo no a wɔtsetse akoko do no nko, hɔn na wɔakɛhyehyɛ asaase no do; osiandɛ nna kwan a wɔafa do abɔ hɔn ho ban nye hɔn nsumaamu mbea no so yɛ dzen araa ma dɔm no nntum hɔn; dɛm ntsi ɔmaa wodzii ewu pii, na wokum nkorɔfo no mu pii.
28 Na ɔbaa dɛ afe eduokron anan mu no, wɔhyɛɛ ase dɛ wɔrodɔr ara yie, osiandɛ Nephifo etuatsewfo no mu dodowara guanee kɛkãa hɔnho, iyi maa awerɛhow kɛsenara kãa Nephifo a wɔkaa asaase no do no.
29 Na awerɛhow kɛsenara so sii Lamanfo no mu; na hwɛ, wonyaa mba pii a wonyinii na wɔhyɛɛ ase dɛ worudu ber a wobu hɔn ara hɔn amansin, na aZoramfo dze atordzi nye ndaadaa bɔtwee hɔn ma wɔkɔdɔɔm dɛm Gadianton edwotwafo no.
30 Na dɛm maa Lamanfo so hun amandze, na wɔhyɛɛ ase dɛ hɔn gyedzi nye hɔn tseneneeyɛ rowodow, osian ebusuasantsen a wɔreba do no hɔn emumuyɛdze no ntsi.
KK Nephi, Helaman ne Babanyin Nephi, ne Babanyin.
KK Bɔgya Dasefo, Okum a Wokum obi wɔ ne Gyedzi ho.
KK Jesus Christ—Nkɔnhyɛ a ɔfa Jesus Christ n’awoo na no wu ho.
Matt. 2:1–2; Hel. 14:5.
KK Gadianton Edwotwafo.